Otu esi ekwe ka Pizza gị ... er ... Ngwaahịa Ree Onwe Ya | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 16, 2015 Tọzdee, Ọktoba 29, 2020 Douglas Karr
Otu ezigbo enyi m, James, nwere Brozinni Pizzeria. Agaghị m aghara - ọ bụ eziokwu New York ịke Pizza kacha mma na Indy. James enyerela anyị aka nke ukwuu, na-eweta ihe ịtụnanya ya Anagbọ ala Pizza Indianapolis na a fundraiser afọ gara aga na isi nri ihe na-abịa ihe n'izu a anyị na-enwe. Na nloghachi, anyị wepụtara ịmepụta saịtị maka ya.
Mgbe anyị bidoro ịmepụta saịtị ahụ, anyị matara na ọ bụ naanị otu ihe dị mkpa - ịhapụ nri ka ọ kwuo okwu. Pizza bụ nri zuru oke maka foto - nwere agba dị ịtụnanya na ị ga-anụ isi naanị site n'ile anya. Kedu ihe kpatara ị ga-eji zoo ihe oyiyi na obere okpokoro na saịtị niile jupụtara na igodo, akụkụ, na ebe ndị ọzọ efu? Na-arụ ọrụ na James na ndị otu ya, anyị kpebiri imelite ma gbanwee ihe isiokwu ụlọ oriri na ọ amazingụ amazingụ dị ịtụnanya nke ahụ dị oke ọnụ.
Anyị nwere ike wuru isiokwu omenala - mana n'eziokwu ọ gaghị aba uru maka mgbalị ahụ ọzọ. Ndị na-emepụta isiokwu ahụ na-arụ ọrụ ịtụnanya na-ewu ụlọ na-agbanwe agbanwe nke na-ere site na puku kwuru puku mana enwere ike ịhazi ya nke ukwuu dịka anyị mere na saịtị Brozinni. Isi okwu a na ihe ndi ozo:
Photoshop faịlụ na ihe omume ị chọrọ iji hazie ndị mbụ eserese tinye n'ọrụ.
Parallax nhazi ndị ahụ na-atọ ụtọ ịnyagharịa ma nye ọkwa dị elu nke ọkaibe.
Na-anabata atụmatụ ndị ahụ mara mma na ekwentị ma ọ bụ mbadamba dịka ha na desktọọpụ.
Uzo mkpirisi nke na-enye ohere maka bọtịnụ, ndị na-ekewapụta ihe, akara ngosi na nhazi peeji nke.
Isiokwu nwata wuru ya ka ị ghara ịgafe ma hazie isiokwu bụ isi - nke a na-emelite na nkwado ma ọ bụ nkwupụta nche.
Ngalaba a kwadoro na Network Solutions yabụ anyị kpebiri ịga na WordPress Bochum ebe ahụ… nnukwu ndudue. Anyị na-ejedebe bandwidth naanị na-emelite faịlụ isiokwu! Mgbe m rịọrọ enyemaka site na ndị ọrụ nkwado ha, ha chọrọ ịkwalite m na nkwado ọrụ aka ma kpọghachi m na oge ọrụ. Ug.
Enwetara m mgbo ahụ ma tinye saịtị ahụ na atụmatụ Bochum zuru ezu, abịakọrọ ihe oyiyi niile iji Kraken, wee hazie ya WP Kaiser iji nyere aka mee ka saịtị ahụ dị ngwa. Anyị ga-ahụ otu esi arụ ọrụ n'ime izu ole na ole sochirinụ tupu anyị ekpebie ma ọ dị anyị mkpa ịkwaga ya na nnabata kacha mma.
N'okpuru ala: Ọ naghị esiri ya ike ma ọ bụ dị oke ọnụ iji wuo saịtị pụrụ iche nke nwere nnukwu isiokwu na nkezi nnabata. Anyị ga-eleba anya ugbu a na saịtị ahụ na-arụ ọrụ nyocha, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na nke ọma!
Tags: brozinnidesignweb imeweebe nrụọrụ weebụ